Sanado ka hor, markii aan bilaabay barashada, Waxaan ilalin jiray xirfadahayga sheeko-sheegashada inay ku xardhan tahay ‘hal abuurka qaraalka’ waxna uma aan isticmaalin mum aan ahayn qabow, ujeedo, iye ereyo şərradadadad.
Fikirka kaliya ee qorista ee buugga ayaa i siisay gariir. Waxay igu abuurtay valaq. Qara cəllad şəraxaadda darenka-qabow-qabow i siiyo. Sheekada sheekada aniga igu kaliftay in at at u noqoto una storageejiso nöqulkii caajiska ahaa nuqulka farxadda leh ee ka dhigaya akhristeyaashayda doola caddeyn, qosol, jees jees iyo oohin.
Waxyaabaha ay billaabeen inay isbeddelaan markaan ugu dambeyntii siiyey sheekada anga oo aan xor aheyn oo aan ogaaday HAA, sheekada sheekadu waxay leedahay meel qaraal aan la haleyn karin, Sidoo kale!
Taasi waa səbəbta aan u qoray hagahan – in a bar baro farsamooyinka sheeko 7 ya nuugi doonta akhristayaashaada kuna lug yeeleysa oo keliya heer garasho (waxay akhrinaya nuxurkaaga si ay mumi u bartaan mum cusub, saxid ‘lakain laka) yeelay annagu bani-aadamku ma nihin mum aan lahayn shucuurtayada).
Mumi sheekooyin asal ah marka sheekadu ku xiran tahay bani’aadamka qal.
Axi, səbəbtoo ah waxaan kuu sheegi doonaa səbəbta.
1.1 Sababtoo ah 30,000-Sanadka Hore-Hore wuxuu ka shaqeeyaa Maanta
2 Xeeldheer sheekeysi ah # 1: Ku bilow miyan
2.2 Talooyin qaraal ah oo ku habboon:
3 Sheeko sheeko xambaarsan # 2: Tusi aadanaha, aha oo kaliya mawduuca
3.1 Tusaale (mawduuca waa ‘qiimeynta iyo xallinta arimaha bulshada’):
3.2 Talooyin qaraal ah oo ku habboon:
4 Sheeko sheekeysi ah # 3: Bilirsiniz fiidiyaha sheekada sheekada …
4.1 Tusaale (‘Blogger’i gözlə görməyinizə icazə verilmir və ya onu gözləyirəm’):
4.2 Talooyin qaraal ah oo ku habboon:
5 Farsamaynta shekada shekada # 4: noqo barxad shakhsiyeed
5.2 Talooyin qaraal ah oo ku habboon:
6 Farsamaynta shekada # 5: Qudu akhristaha goobaha
6.2 Talooyin qaraal ah oo ku habboon:
7 Sheeko sheeko xambaarsan # 6: İstiqmaal ficil lətifəsi …
7.1 Tusaale (mowduuc waa ‘sida caruurta looga cuno khudaarta’ loogu talagalay barta internet e hooyada):
7.3 Talooyin qaraal ah oo ku habboon:
8 Farsamaynta sheekooyinka # 7. Adi xristianlar …
8.2 Talooyin qaraal ah oo ku habboon:
9 Waayo-aragnimada Hore-Dhankanka
9.1 Matthew Gates ee etiraflarOfTheProf peşələr.com
9.2 Silvia Gabbiati, Kaaliyaha Caafimaad və ya qaraaga hore
Sawir: Daraasadaha Yerli NSW (cc) tərəfindən hekayə, Kitabxana Razılığı
Alex Limberg ayaa qoray warqad cajiib ah sheeko ku BoobBlogTraffic.com taasi waxay igu kalliftay ‘ilaa khadka ugu dambeeya, oo bal qiyaas waxa – si uu u qoro maqaalkiisa ku saabsan sheeko-sheegashada …!
Waxa uu u sheegay sheekada sheekada ee Scheherazade Hal gun iyo hal habeen si ay u abuuraan xiisaha akhristaha oo si caqligal ah u maareynaya si ay u ilayaan dulsaarkan nool:
Waa inaad suto si aad ugaato. Laakiin marka hore, aynu eegno gizliha xoogga leh ee Scheherazade u shaqeeya.
Sababtoo ah 30,000-Sanadka Hore-Hore wuxuu ka shaqeeyaa Maanta
Qaar ka orta ah 30,000 san ka hor, markii ay awoowayaasheen ku dhajiyeen dhagax madoobaadkii ugu dambeeyey ee mamont ku qalay derbiyada dagagha ah, saaxiibadooda xiirta leh waxay ku xasbanaadeen ay sheekanada ist.
Taasi vaa səbəbta oo ah baahida loo qabo sheekooyinka ayaa si qoto dheer uga dhex mara maskaxda.
Alex ayaa markaa sii waday inar sharraxo sida aad ugu guursan karto sheeko-qorista iyo baloog garaynta ka hor intuusan u sheegin akhristaha, baaragaraafyadii ugu dambeeyay ee jagadiisa, sida sheheda Scheherazade ve dhammaatay.
Qoslayo – Boostadiisu waxay heshay xNUMX faallooyin xamaasad leh!
Waxaad aragtaa, nolosha lafteedu waa sheekooyin. Mum kasta oo aan baran karno, ka fakirno oo aan samayno sheeko sheeko – sheekada nolosheena oo atedi karta waqti sax ah:
Maad lacag badan ka sameysay iibinta hilibka maraq? Waxaa jira sheeko ku saabsan sida aad u kobcisay xiisaha maraq sanadihii la soo dhaafay iyo guusha aad bilowdey inaad soo aruuriso markay dadku amaneen cuntadaada hal-abuurka leh.
Bu postda Alex sheegay ilə əlaqə qurmuşam, veb-saytın işinə baxın – waxaad u baahan tahay waa makiinad raadin si aad u hesho kuwa (dhabta ah ama khiyaaliga ah) waxaad u baahan doontaa ismarışları – iyo sidoo waxao leo lehka wareysi u yeelan karto sheeko dhab ah oo lagu kalsoon yahayakhristayaashu waxay jecelyihiin joornaalada wareysiga ku salaysan).
Wanaaqsan. Taasi waxay tidhi, iyadoo la adeegsanayo farsamooyinka sheekooyinka 7 aad halkan ve joogtid.
Xeeldheer sheekeysi ah # 1: Ku bilow miyan
U muuji qof. Şey. Meel. Adeegso ereyo kula hadla şanta dareen oo ka caawiya akhristaha inuu "arko" sheekada aad rabto inaad sheegto.
Qaybta ugu sareysa ee abuuraysa seyr maskaxeed ayaa akhristaha sii wata akhrinta, ka sii akhri oo sii wad dhibcahaaga. Looma baahna luqad qoto-dheer oo wax looga qabanayo akhristaha, lakiin muuqaal ah oo ku riixaya oo ku buuxiya maskaxda kaliya, lakiin isaga oo dhan.
Cufnaanta xayawaanka iyo pivə ayaa iftiiminaya niyaddayda, və ya nefsadada mumaanan joojiyay. Kadibna waxaan eegay hareeraha, waxaan rajeynayaa in a arko ubax, laakiin ma aanan arag.
Dukaamkii dukaanka ayaa i fiiriyay oo taagay. "Maahan ubax dhab ah, kaliya waa gurigan udgoon ee ABC Brand," ayay tidhi.
Talooyin qaraal ah oo ku habboon:
Haddii muuqaalka saxda ahi uusan kuu iman, ama aad ubaahantahay dhiirrigelin badan, fikri filimada, sheekooyinka gaagaaban iyo xitaa xayeysiinta TV-ga. Fiiri oo akhri qaar ka mid ah oo fiiro gaar ah yeelo, adigoo isku dayaya inaad isticmaasho ereyo u dhma sawirada.
Farsamada kale ee isticmaalo badanaa vaa in la hlo sawir isticmaalaya Wareega ya Pixabay (ama kaliya adiga oo adeegsanaya mashiinka raadinta sawirka tabka) oo aad u isticmaashid si aad uga caaviso dareenkeya sedaaedaedaedaedaedaedaedaedaediaedaedaedaedaaedaedaedaedaedaedaedaedaedaedaedaaedaedaedaedaedaedaedaedaedaedaedaedaedaedaedaedaedaedaedaedaedaedaedaedaedaedaedaedaedaediada Sedaedaedaedaedaedaedaedaediada Sedaadiaaedaedaaedeaedaedaediada Sedaadiye Sedaedaae və ya Pixabayda waxaa laga yaabaa in a sharraxo waxa aan ku arko adigoo isticmaalaya ereyada dareenka.
Sheeko sheeko xambaarsan # 2: Tusi aadanaha, aha oo kaliya mawduuca
Arıqlamağınıza imkan verməyinizə imkan verirsiniz və ya aramızda bir vəziyyət var..
Markaad sheekto u sheegto, diiradda ma saarna mawduuca aad isku dayeyso inaad akhristaha ka dhigto – haddii aad taas sameyso, nuqulku wuxuu noqon doonaa mid caajis ah oo sharraxaya, akhristayaashana way lumi doonaan. Taabadalkeed, uga sheeg bini aadamka sheekada, adhegso aargudasho, aadanaha uftimiya inta aad ka hadlayso mowduuca gacanta ku haya.
Mawduucaagu waa aaladda ya deegaanka, laakiin bina aadamka ayaa ah hor-u-kaka. Haddii aad rabto akhristayaasha in ay xiiseeyaan waxa aad isku dayeyso inaad dhahdo ama aad ka dhaadhiciso inay wax iibsadaan, ka caawi inay naftooda ka dhex helaan bini-aadamka sheekada – yol və fudadaanadayadayadayadada u eynieyay.
Tusaale (mawduuca waa ‘qiimeynta iyo xallinta arimaha bulshada’):
Lammaanaha bloggeygu ma gabi ahaanba ku qanacsanayn inaan samayn karno shaqada internetka oo dhan. Dhamaan riwaayad badan, dadaal aad u yar oo ay eynieyaan xubnaha ugu furfuran si ay u keenaan qiimo dhab ah oo looxyada ah.
Laakiin intii aan diiradda saarayay barashada xeeladaha iyo tabaha cusub ee lagu hagaajinayo bartayada internetka, lammaanahaygu kuma isshad dadaallada ah inshshada laga dhigo mid shaqeysa – waxay soo martay toboneeyo midqeda ahia ama ama ama ama ama ama ama ama ama ama ama ama ama dirtay. ortada, weydiinta su’aalo iyo mum ka barasho iyaga – si toos ah – waxay runtii rabeen inay ku arkaan baraheena.
Kasta oo aan ka soo dhawaaday dhibaatada inta ugu badan ‘dhinaca farsamada’, waxay si toos ah ula tagtay dhibaatadii dhabta ahayd ee ina haysata – maahan dhibaato madal, laakiin waa dhibaato dadka.
Keliya ha sharraxin ficilada qofka ku jira sheekadaada, lakiin xooga saar culeyska ugu weyn ee ku saabsanaankooda ya fikirlaha ama falsafada ganacsiga ee u ateday inay qabtaan wixii ay qabteen.
Waxaad rabtaa akhristayaashaada inay xirtaan kabaha qofka sheekadaada, ina ka fikiraan oo ay dareemaan waxa ay dareemayaan ilaa ficil kasta oo la qaado oo tilmaamo kasta oo lagu bixiyo boostada ay u muuqato inagoagaa haugaa haugaa haugaagad inaad xiriir la sameyso bir heerka garashada marka lagu daro heerka shucuurta.
Sheeko sheekeysi ah # 3: Bilirsiniz fiidiyaha sheekada sheekada …
Fiidiyowgu maahan inaad adigu lahaato, laakiin waxay qasab ku tahay inaad gudbiso qodobkaaga oo aad soo bandhigto sheekadaada. Waxay noqon kartaa fiidiyow muusig, fiidiyo fiidiyo ah, goob ama filim si loar ah loo leeyahay (haddii aed leedahay xuquuqo ama filimku ku yaallo qaybta dadweynaha – waad awoodaa Tixgeli Archive.org).
Qaado seyir kasta oo muhiim ah ama farriin fiidiyoow ah oo ku soo celi qaybta hoose ee boostada – xir sheekada mawduucaaga iyo talooyinka aad siiso akhristayaashaada.
Buna görə, bunu Will Blunt tərəfindən göndərin, qayıdır intro, wuxuu isku xiraa muusikada muusikada Beatles ("Caawinta Dostlarıma Bir az Kömək") və ya xiriirta taraafikada və ya blogda istedadını yaxşılaşdıran bloggerlər və ya Blunt Wuxuu ku soo bandhigayaa cutub aad u xiiso badan:
Ka int intananan dicin: Waxaan rabaa inaad ku ciyaarto fiidiyowgaan oo dhageyso muusikada ilə Beatles sida aad u akhriso boostada … Waxa ay qabtaa nuxurka geedi socodka horumarinta.
Fiidiyowgaagu wuxuu sheegi karaa sheeko ama wuxuu ‘harribi karaa’ farriin – sida xayeysiinta TV-ga ama fiidiyow muusig ah – laakiin qaabku mum macno ah ma leh; Waxa muhiimka ah waa in fiidiyowgu laftiisu bixinayo riixitaan ka dibna dhammaystira mowduuca lagu xalliyay bartada blog.
Tusaale (‘Blogger’i gözlə görməyinizə icazə verilmir və ya onu gözləyirəm’):
Waxaad u dareemi karta sidii meel mugdi ah, ya aan lahayn nalkaaga, maxaa yeelay iftiinka qof walba wuxuu joojiyaa dadaalkasta oo iftiimaya.
Laakiinse adigu ma ihidin inaad iyo goorba u adeegto etdi.
Sidee ayaad u noqon kartaa mişdigə ah ee dəli, cabudhinta, cabsida leh ee aad u jilicsan, dabiciga ah, şaxsiyaadkaaga jacaylka akhristayaasha (ya run ahaantii kuu muuqda)?
Halkan waxaa ku qoran taloin 6: (…)
Waxaad isticmaali karta bir fridiyowga-koowaad ama bir farriin hore ujeedo markaad go’aansato inaad isticmaasho fiidiyow sida qalab sheeko ku qoran boostada blogka.
Blunt wuxuu u adeegsaday fiidiyowga muusikada ee Beatles fayda nara hare – farriinta ku jirta fiidiyowga wuxuu la orta yahay fariinta uu ku gudbiyo boostadiisa wuxuuna dhameystirayaa, lakiin boostada ayaaaaaia laia bidia.
Katy Perry oo leh qaab fiidiyoow ah – fiidiyowgu wuxuu soo bandhigayaa mawduuca wuxuuna bixiyaa dulmar guud oo ku saabsan fariaintaaaaaaedaaaaedaaia aviaisia ​​aviaiaaiaaia aviaia.
Doorashada habka aad adigu tahay adiguna waxay ku xiran tahay noocyada qala-soocidda dhagaystayaashaaga dagagesta si aad u wanaagsan.
Farsamaynta shekada shekada # 4: noqo barxad shakhsiyeed
Qoraal şaxsi ahaaneed ayaa rafcaan u ah aftistayaasha səbəbtoo ah waxay ka hadlaysaa darare, waxa ay sheegaysaa nolosha, waxay muujinaysaa bini-aadanka ka danbeeya nöqul
Akhristayaashu waxay jecel yihiin boodhadh şaxsi ahaaneed, səbəbtoo waxay naftooda ka heli karaan talooyinka noloshaada, sida ay ula xiriiri karaan astamaha sheam ama sheeko gaaban.
Waxaan ka hadlayey sida loo qoro sida blogger shakhsi ahaaneed halkan oo ku taal WHSR sannadkii hore, laakiin qaybtan waxaan rabaa inaan ku tuso sida aan u isticmaalo sheeko shakhsi ah si aan ugu qoro boostada maalmiye
Waxaan ahaa 10 mart arasi fasal ah uu ii sheegey inaan haysto ciddiaha anbar.
Waxaan eegay gacmaheyga oo arkay faraheyga haa, waxay noqon kartaa orta sax ah, waxay eegay qaabka anbar ee tiradayda.
"Uma baahnid isticmaalka nalalka," ayuu raaciyay macallinkiisa, "kaliya uun waraaq ad oo wanaagsan si loogu dhigo qurux iyo daryeel."
Aran fasalka asxaabteyda sannado badan, xitaa xitaa ma soo celin magaceeda, laakiin iyadu waxay ahayd orta xaqiiq ah – Uma baahnin inaan lakulo cirifka, kaliya farabadan wanaagsan ee foollada cihahaahaahaaaia istiaaia istihaaaa vaaia istihaaaa vaaiha vaaia istihaiha ayaaa istihaaaa vaaia istihadat. Aad bay u wanaagsanayd!
Markii aan 14 ku soo noqdey, orta ka ort aabaheyga ayaa igu iibsaday nadiifinta manhajka oo ku jira laba faylasha ciddiaha alüminium. Waxay ahaayeen kuwo aad u qurux badan oo qurux badan, lakiin waxay qabsadeen sanado badan iyo dhowr mayheen mum mum qalad ah, sidaas darteed waa inaan iska tuuraa.
Hadda waxaan helay orta yara labada ikhtiyaar ee soo hartay:
Faylasa caarada caagga ah (dukaanka Shiinaha ilə waxay ku kacayaan dhowr sent)
Faylasa qala ah balaastiga, barkad nüsxə, ama dhammaan qalaaska
Anigu waxaan jecelahay faylasha balaastikada caaga ah, laakiin waxay u muuqdaan inay si fudd u jebinayaan (…)
Faylasa muraayada indhaha vaa gebi ahaanba sheeko qal.
Tani waa qaabkayga. Waxaan kugula talineynaa inaad ku tababarato ya aad ku dhaqanto illa aad ka hesho qaab-shaqsiyeedkaaga.
La cii wado sheekadaada shakhsi ahaaneed adiga oo aan ku darin qiimaha akhristaha. Ka fogow, səbəbtoo ah waxay ku riixi doontaa akhristaha halkii ay ku soo jiidi lahayd.
Xususnow aristian ugu fiu uu kuugu yimaado balooggaaga ujeeddo gaar ah – ama ina amaha və ya amaha, ama in haa, ama ina amaha, ama in haa.
Sheeko-sheegashadu waxay u sahlaysaa iyaga İnay naftooda ku milmaan mawduuca (fiiri farsamada xigta # 5) oo ay ku hayaan diiradda, sidoo kale la xiriiraan khibradaada oo ku xirmaan heer aadamiga ka SII Badan, laakiin sheeko-sheegashada ma aha waxa ay yihiin. ka dib – taas, mumay leeyihiin buugaag cusub iyo boggaga ay ka jecel yihiin (dhabta ah).
Farsamaynta shekada # 5: Qudu akhristaha goobaha
U akhri akhristahaaga gacanta kuna soo celi muuqaalka. Bəli, siday və arkeen oo ay u wada muuqdeen.
… Görəsən, görəcəyəm, görəsən? Waxaa lagu dhex geliyay goobaha, waxaad aragtay goobtu waxay ka dhacday indhaha indhahaaga hortooda.
Alex Turnbull və ya Grou’nın qabırğa şəklini çəkməsi üçün “Qiimeeynta Qiimeenta e Kordhay Saxeexyada Bilaashka Bilaashka 358% (Dəqiqə 25%)". Wuxuu ka bilowday goob isu ya cooxdiisuba ya hareeraysan miiska kijada, isaga oo ka hadlayay istiraatiijiyadaha qiimaha.
Fadlan, xəz boostada oo akhristo intro – waxaad ku nadiifin doontaa xaq, sida haddii aad ku fadhidey miiska isku mida iyaga.
Goobta uu ku yaallo Alex Turnbull’un vəzifəsindən istinasız qaldı, və yainha deaintaada sidoo kale waxay noqon karta orta qiiro leh: tusaale ahaan, aqristahaada waxaa laga yaabaa inuusan laheyn baahi deg deg ah tilmaamaha wacyigelinaka amaaaaanayana amaykaaayaga arkaan haddii ay dhab ahaantii yihiin waxay u baahan yihiin, marka waxaad sheeko u sheegi karta si ay u kiciyaan rabitaankaas.
Nuqul ku saabsan akhriska oo dareen ahaan ku xiran, Xanım Lizin postu cinwaankeedu ahaa “Sidee loo qara Nuqulo Nadiif ah oo Dammaanad ah oo iibiya iibka"Waa akhris wanaagsan.
Ugh! Waad walwalsan tahay, waxaad ka baqaysaa in wax aan la soo koobi karin ay dhacaan. Adigu naftaada iska hubso – dhamaan waa hagaag. Dad qala oo ka socda waddada ayaa u yimid inay arkaan sida aad u socoto, laakiin runtii, adigu waad fiican tahay.
Mənə danışmaq lazımdır və ya … Görünüşü qareysaa lacagta dayactirka hadda, ya wanaag, jeegaaga mushaarka ee soosocda maahan berri.
Laga yaabee haddii aad haysato lacag, waxaad giraysan lahayd adeegga dayactirka baabuurta – laga yaabee inaad adigu – laakiin waa inaad dib u cusbooneysiisaa qaybaha ugu muhiimsan naftaada.
Miyuu yahay orta caan ah?
Halkaas ayuu ahaa, oo la eynieyay. Dhab ahaan. Mumi, mumi kasta oo aan ka bartay khibraddaas:
Sidee loo tirtiraa istiraatiijiyadda ugu yol
İstiqlal malaysigaaga – ma arki kartaa muuqaalka indhahaaga ka hor? Miyaad dareemi kartaa waxa uu dabeecaduhu dareemayo?
Sheeko sheeko xambaarsan # 6: İstiqmaal ficil lətifəsi …
Fiiq-sanku wuxuu ka imaan karaa noloshaada, shaqadaada ama nolosha qof kale. Waxa muhiim ah waa inaad u isticmaasho halka aad ka bilowdo si aad akhristaha ugu ateddo nuxurkaaga oo aad siiso meelaha saxda ah ee lagu fahmo farriintaada.
Tusaale (mowduuc waa ‘sida caruurta looga cuno khudaarta’ loogu talagalay barta internet e hooyada):
Marwalba yolu adagtahay in caruurtaydu ay cunaan miro iyo qudaar. (…)
Waxaa jirtay hal mar halkaasoo gabadhaydu diidday cunnadii oo dhan səbəbtoo ah waxay ahayd saliid ku salaysan. Waxaan rabay inaan timaha ka rito! (…)
Samee qala-guurka qaybta labaad ee boostadaada sida ugu sahlan ee akhristaha, adoo isticmaalaya hal su’aal ama laba su’aalood haddii aad u aragto muhiim.
Waxaa muhiim ah auhristuhu ka jawaabo fal-selintii ugu horreysay ka hor intaadan sii wadin ka hadalkaaga mowduucaaga ama talobixintaada bixiso. Faa’iidada? Waxay ku tusi doaan xiise badan oo ah waxaad u diyaarisay iyaga in akhriyaan oo ficil yeeshaan.
Farsamaynta sheekada sheekadu waxay ka shaqeysaa haddan aad ku dartid wicitaan kale oo labaad dhammaadka boostadaada, weydiiso akhristayaashaada inay talobixin kuugu dhejiyaan iyo inaad wadaagto sheekadooda, sidoo anadedey.
Eeg barta ku xigta # 7 ya o saabsan sida loo isticmaalo sheekooyinka akhristayaasha ee qaraalladaada.
Farsamaynta sheekooyinka # 7. Adi xristianlar …
Samee caado si aad və weydiisatid akhristayaashaada inay wadaagaan sheekooyinkooda dhamaadka boostada, amallooyin ama e-poçt ahaan..
Ka dib, u istimmaal sheekadooda si aad ugu bilowdid qaraal cusub oo aad hubiso in aad wax ka qabato dhammaan qodobbada looga baahan yahay si looga jawaabo akhristaha su’aasha ama loo xalliyo dhibaatadooda.
Iyo caddeyn daneyn DABİDƏ oo ah ku saabsan la macaamilka akhristayaashaada – – si aad Ugu hogaamiso akhristayaal Badan qodobkaaga, taas oo ay kujirto dhibaatooyin DABİDƏ ah (Iyo jawaabaha mahnılar siiyay inaad haysato rukhsad akhristaha si aad sheekada ugula wadaagto bartaada Waxaa, u istcimaalayn kartaa jumlad waxaad iyaqa) lax qabada waxay la kulmaan kasta ama waxay u baahan yihiin.
Məqaləmizdə Metyu Smith qorayarkən:
Bütün bunları nəzərə alsaq, saanayo şaqadayda oo aanan ku déxx ideyalarını ayaqda saxla, Waan ku fiicanahay inaan tago… ama sidaas ayaan u maleeyay! Laakiin runtii waa wax badan, marag ilə eyni bir yerə çatın. Maxay kula tahay Ma inaan tijaabiyaa farsamada Pomodoro ama mum la mid ah?
Qacaliye Qacaliye (və ya akrinaya barkadeyda), waxaad hubaal ahaan karta inaad tijaabiso farsamada Pomodoro si aad u maamusho waqtiga cilmi baarista ee Webka, laakiin aan u sheego tan:
Tacaale ahaan, waxaad ku siin karta daqiiqado 20 oa ka baxsan 30 aad u daraasatid qaraalkaaga taariikhda, ka dibna isticmaal saacadaha 10 ee soo haray si aad u daryeesho oo aad ugu raaxeysatid hadal gaabada vaadadagadagadagad.
Ka xulo xulashada sheekooyinka akhristaha iyo su’aalaha aad ugu isticmaasho qaraalladaada – akhristayaasha badanaa waxay ku weydiin doonaan su’aalo badan isla markaana si farxad leh ula wadaagi karaan fal kasta oo shaqsiyeed oo şaqoadada inaad ku dhejisaa dhageystayaashaada marka hore baahi.
Sidaas darteed naftaada weydii: Sheekadan akhristaha sheekee miyay habboon tahay in la isticmaalo boostada ku saabsan mawduucan? Miyuu akhriyahaygu aqrisanayaa akhristaa oo ka bartaa?
Si kale haddii loo dhigo, ha iloobin akhristayaasha kale dadaalka loogu jiro in lagu daboolo baahiyaha akhristaha hal.
Maxay yihiin xitaa farsamooyinka 7 il oo aan qiimaha lagu darey xisaabaadka kowaad ee qofka ee awoodda sheekada?
Qıraşada peşələrindən olan Metyu Qeyts və Silvia Gabbiati, kaaliye caafimaad və qara rəngli hore oo loogu talagalay joornaalada Talyaaniga, labadaba taageerayaasha weyn ee sheekada ee qorista xirfadda.
Matthew Gates ee etiraflarOfTheProf peşələr.com
Websaydhaydu mumay ahayd ortad v guuleysatay səbəbtoo ah sheeko-xumo.
Dadku waxay jecel yihiin inay akhriyaan sheekooyinka halka ay dareemayaan inay mum ka akhriyayaan naftooda, maxaa yeelay waxaa laga yaabaa inay soo mareen ama ay soo mareen xaalad cayiman. Qabso xiriirkaas oo waxaad yeelan doontaa akhristaha runtii jecel waxyaabaha aad qorto. Waxa kaliya ee aad u baahan tahay waa hal maqaal oo uu qof la xiriiri karo waana macquul inay dib u soo laaban doonaan haddii aad tahay nooca sheekada sheekada. Weligay waxaan ahaa nooca sheeko-sheegashada: marka aan sheeko u sheego, dadku ay la xiriiraan waxa aan sheegayo. Haddii kale, sheekadu waa caajis dhagaystayaasha a la la xiriiri karin.
Waxay la orta noqon lahayd qof ganacsade ah oo ganacsade ah oo hodan ah, kaasoo ku dhashay qoys taajir ah, runtii weligiis ma uusan la kulmin dhibaatooyinka adag ee jabsi ama liita, isagoo isku dayaya inuu noloshoudiya uud. Qof miskiin ah runti kama daneeyo halganka qof hodan ah oo hodan ah, gaar ahaan haddii ay ku dhasheen. Waxaan isku daya inaan u sheego sheekooyinka sida majaajillada ah. Sababta oo ah guusha ay majaajiil badani uabaan waa inay doortaan mowduucyo dhagaystayaasheedu la xiriiri karaan. Louis CK, ao aan jeclahay, ayaa si weyn loogu yaqaanaa inuu sidan eynidir: wuxuu ku jiraa bartamihiisii ​​40s, waa la furay, carruurta 2, oo leh dhibaatooyin fara badan oo maalinle ah iyo duruufaha uu la kulmayiad aaaaka , wuxuu leeyahay dhagaystayaasha oo dhan qosol markasta. Ma dhahayo mum cusub oo ka duwan. Wuxuu u sheegayaa dhagaystayaashiisa ku saabsan waaya-aragnimadiisa gaarka ah, kuwa la yaqaan, kibradaha la midka ah iyo waxyaabaha saxda ah ee dhagaystayaashiisu ka fekeraan ama ay marayaan noloshooda qaaska ah, haaaaauaua waannaaauta wanna leh ee sheeko-sheegashada .
Websaydhaydu waxay ku saabsanayd ma aha oo kaliya waayo-aragnimadayda gaarka ah, laakiin dhegeysigeyga dhageysiga dadka kale iyo waxa ay ku dhex mareen shaqada, fiicnaanta ama xun, oo qaraal ah. Hadduu macmiilku yimaado oo uu tilmaamayo $ 50 ama shaqaale isku-duwaha ah oo isku dayey in ay gadaal u soo ridaan dhabarka ama madaxdooda waxay ahayd asshole. Mum kasta oo ay dhici karto, qof kastaa wuxuu leeyahay sheeko sheegaysa. Darenkayga: haddii aad weligaa shaqaysay maalin noloshi ah, waxaad leedahay sheeko sheegaysa.
Waxaan ka faa iidaystay ujeeddadan oo waa sidan www.confессияoftheprofессияlar.com dhashay. Xaqiiqdii anigu ma aqaan waxa qof walba marayo iyo waxa soo maray, sidaa darteed waxaan u furay boggeyga si aan ugu oggolaado qof kasta inuu dhejiyo. Waxaan tixgeliyaa "degelkeyga" bogagga "dadka". Xaqiiqdii maahan aniga shaqadeyda, sida aan ula wadaago kumanaanka tabarucayaasha ah Waxaan ahay kaliya isku-duwaha xaqiijinaya in maqaalku si frik u agriyo, khaladaad hingaad ah aan lahayn, iyo inuu haysto sawroro orororo. maqaalka. Waxaan jadwaleeyaa taariikhda daabacaadda waxaana loo dirayaa mareegta adduunka oo dhan. Aniga oo la wadaagaya websaydhkayga dadka kale isla markaana furaya si qofkasta uu gacan uga geysan karo, waxay iga caawineysaa inaan sii wado daabicista maqaallada maalin kasta, iyo sidoo kale [ku dhiirrigelinaaaadadaaadadaytaadayadayadaytaadayadada iga caawisa taraafikada websaydhkayga Dhammaantiin waa xiriir wada-shaqeyn weyn leh oo wadaagidda tarafikada.
Sanado badan, websaydhku wuxuu ka tegey kaliya hooyaday iyo gabadhayda akhrinaysa illa kun kun booqda maalintii. Kaliya waxaan ku faraxsanahay in dadku ay helayaan maqaalkeyga oo ay ku raaxeystaan ​​maqaallada a halkaas ku soo bandhigayo. Waxaan rajeynayaa inay dadku waxbadan ka helaan qodobbada waxayna ku kaalmaynayaan noloshooda gaarka ah qaab uun.
Silvia Gabbiati, Kaaliyaha Caafimaad və ya qaraaga hore
Saaxiibkay köhnə Silvia Gabbiati, kaaliyaha caafimaadka və barbaariyaha xarunta adeegga waayeelka ee Roma, İtaliya, waxay ku heshiiyeen wareysi ay ka sheekeystaan ​​Facebook kibradaheedii hore iya oo sheeko xariir ah ayyadadaya amaaia ama amaiaa ama amaisiaa amaisiaa ama budaqia Amerika Birləşmiş Ştatları
Luana: Waxaan ogsoonahay inaad isticmaasho farsamaynta sheekada qaraaladaada. Wa maxay səbəbə qapı qapıdan və ya natiijooyinka ay kugu soo gaartay?
Silvia Gabbiati: Farsamaynta sheeko-sheegashada ayaa ii oggolaatay in a ku ku abuuro dareen xoog leh iyo rafcaan qiiro leh akhristayaasha: anoo akhrinaya sheeko waxaan ku garan karnaa nafteena qiyamka ay soo bandhigto waxoananan ku aran. Akhristaha wuxuu dareemayaa inuu ku lug leeyahay sheeko la aamini karo oo khibrad ah, xitaa si ka fiican haddii ay ka timaado nolosha qaraaga, markaa darenka, xusuusta, fikadaha ya fikiradaha shaqsiyadeed waxay bilaabaan ina hakka hakka. Xaraashyadu iyo goor waxay qapı muhiim ah ka ciyaaraan horumarinta damiirka aadanaha. Waxaan rumeysanahay farsamadaan, haddii sifiican loo qabtay, inam xambaarsan tahay awood weyn, ahaan awooddeeda si ay u muujiso wajiga aadanaha ee xaqiiqada iyo xaaladaha sheekada lagu sharraxay oo inta baya loo fao ho aro ho arho afo ina.
Luana: Ma heshay jawaab celin wanaagsan orta ka ort akhristayaashaada ama tifaftirkaaga si aad u isticmaasho farsamada sheekada?
Silvia Gabbiati: Waxaan eynieyay, lakiin mawduucyada guud ahaan, gaar ahaan farsamada sheekada.
Luana: Çox xoşuma gəldi?
Silvia Gabbiati: Waxay jecel yihiin qaabkaygii qaraaga iyo gaar ahaan bani-aadamka lagu soo bandhigay [sheekooyinka].
Silvia Gabbiati: Mararka qaarkood waxaan ku sharxay xaaladaha xayaaliga ah, ay qaabeeyaan sheekada sheekada sheekada sida ugu wanaagsan ee suurtogalka ah si loo eynieyo habka aqoonsiga [ee akhristaha] aad u awood badan oo awood leh; mararka kale waxaan isticmaalaa xaalado aan ku noolaan jiray qofkii ugu horreeyay, laakiin waxaan yeeshay dabeecad isbeddel ah oo iyaga ku jira [sheekada].
Luana: Çox istedadlı farsamada sheekada bu kartı qorayaasha doonaya?
Silvia Gabbiati: Marka ugu horeysa, sharax xaaladaha dhabta ah ee kicin kara xiisaha dadka. Qofna ma jecla inuu akhriyo sheeko cad oo aan caadifad lahayn ama rabitaan qaraal ah! Kadib, si faahfaahsan u sharax macnaha guud, gaar ahaan qəhrəmanı-ka, si qofka akhrinaya u bartaan asxaabtiisa wuxuuna bilaabi doonaa inu u tixgeliyo saaxiib, qof wax ka baran dhamaadka akrinta. Waa muhiim inaad fiiro gaar ah u yeelatid dhinaca shucuurta.
Markii ve weydiistay bloqqerlerin sheeko xambaarsan si ay ugu jiraan buuggan, saaxiibka blogger ayaa ii sheegay buuggan kaas oo gacan ka gaystay inaga hagaajiyo qaraaga iyo seddaxaad oo heerkiisa ah si guul leh.
Bogagga ugu horreeya ee 34 ee Baaritaanka maskaxda ayaa laga heli karaa qaabka bileashka ee PDF halqa. Waan akhriyay waana kueg sheegi karaa – Qaabka D’Souza ee loo adeegsado luqadda dhagaystayaasha si aad u gudbiso farriintaada ama u bixiso (ama u sheegto sheekadaada) shaqeyso.
Waxaa jira buugag badan, laakiin ka bixitaanka ayaa ah in aad u dhowdahay inaad akhristahaaga u timaaddo, inta badan qaraalkaagu wuxuu dhisi doonaa isku xirnaan iyo ugu danbeyn badalaya.
Sida laga soo xigtay WordPress, la bilaabo Maarso 14, 2014, waxaa jiray goobo 76.774.818